Rafitra - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Distance afovoany 72mm
Fitsapana ny tsingerina In-200 000
Nomery lakile 3 lakile
Malagasy EURO Standard
Tabataba: ara-dalàna: mihoatra ny 60 decibel; YALIS: 45 desibel eo ho eo.
1. Trano fitokonana azo ovaina, izay mahatonga ny fametrahana mazava tsara kokoa sy hampihena ny fahasahiranana fametrahana.
2. Sakan-tsisin'ny endrika L-namboarina mba hahazoana antoka fa ny làlan'ny fandehanan'ny sombin-tsoroka dia mifanaraka amin'ny làlan'ny fihodinan'ny bolt, mba ho malama kokoa ny fiasan'ny bolt.
3. Ny gasket mangina dia apetraka eo anelanelan'ny lohataona sy ny tadiny ary amin'ny tranga fitokonana mba hampihenana ny tabataba vokarin'ny hidin-trano mandritra ny fiasana.
4. Ny bolt dia rakotra sosona nylon mba hampihenana ny fikorontanana ary hangina kokoa.
Inona avy ireo teboka fanaintainan'ny tsena voavahan'ny YALIS Magnetic Mortise Lock?
1. Ny famolavolana firafitry ny vatam-bidy eo amin'ny tsena dia sarotra ary tsy mihetsika ny fivezivezin'ny bolt. Noho izany, ny fanoherana rehefa apetaka ny vodin-varavarana dia lehibe, ka miteraka fiainana serivisy fohy amin'ny vatan'ny varavarana.
2. Ny toerana fametrahana tranga fitokonana eny an-tsena dia raikitra ary tsy azo ovaina mora azo, izay mampitombo ny fahasarotana apetraka.
3. Rehefa miasa ny ankamaroan'ny hidy mangina eny an-tsena, dia tsy dia tsara loatra ny malama amin'ny bolt, ary mafy ny feo fifandonana eo anelanelan'ny singa hidin-trano, izay mampihena be ny vokatra mangina.
5mm Ultra-mahia Rosette sy Mekanisma lohataona
Ny famolavolana mekanika lohataona an'ny rosette fikirakirana eny an-tsena amin'izao fotoana izao dia mavesatra indrindra, mandany akora betsaka, ary somary marefo ny bika aman'endriny, izay tsy mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny vondrona mpanjifa. Ny rafitra rosette sy lohataona YALIS matevina dia vita amin'ny firaka zinc misy 5mm ihany ny hateviny. Misy lohataona miverina ao anaty ao, izay mampihena ny fatiantoka ny vatan'ny hidin-trano rehefa voatsindry ny tahony, ary tsy mora ny mihantona aorian'ny fampiasana maharitra.
1. Ny hatevin'ny rosette tantanana dia ahena ho 5mm fotsiny, izay mahia kokoa sy tsotra kokoa.
2. Misy loharano miverina indray mandeha ao anaty ny rafitra, izay afaka mampihena ny fatiantoka ny vatan'ny hidin-trano rehefa voatsindry ny vatan'ny varavarana, ka voapotsitra ny vatan'ny varavarana ary averina moramora kokoa ny tantana varavarana, tsy mora tohina.
3. Rafitra toerana fetra avo roa heny: Ny rafitry ny toerana fetra dia miantoka fa voafetra ny zoro fihodinan'ny vavahady, izay manitatra amin'ny fomba mahomby ny fiainam-panompoan'ny vavahady.
4. Ny firafitra dia vita amin'ny firaka zinc, izay manana hamafin'ny avo kokoa ary misoroka ny fiovana.
Structure Mini & Rosette & Escutcheon
Amin'izao fotoana izao, ny endrika anatiny avo lenta dia malaza amin'ny fidirana amin'ny varavarana sy amin'ny rindrina, ka varavarana minimalista avo lenta toy ny varavarana tsy hita maso sy varavarana avo valindrihana no nipoitra. Ary ity karazana varavarana minimalista ity dia mandinika ny fampidirana ny varavarana sy ny rindrina hanatsarana ny fijerin'ny maso amin'ny ankapobeny. Noho izany, YALIS dia namorona mekanisma lohataona kely sy kitapom-bokatra hampihenana ny haben'ny rosette sy escutcheon. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ny mekanisma lohataona sy ny kitapom-batana amin'ny lavaka varavarana, ny rosette sy ny escutcheon dia tazonina amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny varavarana sy rindrina araka izay azo atao. Izy io dia miaraka amin'ny endrika fampisehoana fampidirana varavarana sy rindrina.
YALIS Glass Splint
Mba hihaonana amin'ny fironana eo amin'ny tsenan'ny varavarana fitaratra somary manidina, ary hametahana am-baravarana am-polony am-polony am-baravarana izay novolavolain'i YALIS tao anatin'ny 10 taona lasa ho an'ireo varavarana fitaratra somary lavalava dia natombok'i YALIS ilay fitaratra fitaratra. Ny fitaratra fitaratra dia ny tetezana eo anelanelan'ny varavarana fitaratra sy ny vavahady fitaratra, ary afaka mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa samy hafa manana haben'ny varavarana 3 hafa. Ny fantsom-boasary fitaratra dia azo ampifanarahana amin'ny tanan'ny vavahady YALIS. Misy fehikibo vita amin'ny kofehy ao anaty sombin-kazo hisorohana ny fivezivezena. Ny endrika tsotra sy endrika manavao dia mitondra fomba hafa amin'ny trano tsotra.